simbi induction brazing - induction kudziya muchina mugadziri | induction kudziyisa mhinduro
simbi induction brazing
Kubatanidza Masimbi neBrazing uye Welding Kune nzira dzinoverengeka dziripo dzekujoinha simbi, kusanganisira kusanganisa, brazing uye soldering. Ndeupi musiyano uripo pakati pesimbi uye brazing? Ndeupi musiyano uripo pakati pekushongedza uye kugadzira? Ngationgororei mutsauko pamwe nekuenzanisa mabhenefiti pamwe neakajairika maficha. Iyi hurukuro inodzamisa kunzwisisa kwako kwesimbi… Read more
Categories Technologies Tags brazing, kubatana kwekubatana, mashandiro anoita brazing, Welding inoshanda sei, induction brazing simbi, induction jointing simbi, kubatanidza brazing, kubatanidza kutenderera, simbi brazing, simbi brazing hita, simbi induction brazing, simbi Welding, simbi Welding hita, kutengesa